State and Division News | NLD | Page 16
Home News State and Division News
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 27, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
(၂၉) နှစ်ပြည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း နှစ်​ပတ်လည်အခမ်းအနားကို အမှတ်(၉၇/ခ) အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ ဌာနချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပရာ ကျန်း...	Read more
၂၉ နှစ်မြောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 25, 2017 In: Breaking News, News, State and Division NewsNo Comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 24, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
ရန်ကုန် ၂၃ ၉ ၂၀၁၇ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏တွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရာက်အမှာစကားပြောကြားခ...	Read more
ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအတွက် မန္တလေးအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ အလှူငွေပေးအပ်
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 18, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
နေပြည်တော် ၁၇. ၉. ၂၀၁၇ ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအတွက် မန္တလေးအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ အလှူငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကို နေပြည်တော်စည်ပင်ရိပ်သာ(၂) Unison စားသောက်ဆိုင်တွင...	Read more
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 14, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
Zawgyi Version ၁၂/၉/၂၀၁၇ နေ့လည် (၁၂) နာရီ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုရုံးချုပ်၌ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ နှင့် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ Unicode...	Read more
ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် အရပ်ဘက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 13, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် အရပ်ဘက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်ကြသော – WON (Women Organization Network), GEN (Gender Equality Network) ,(WLB – Women League of Burma) အဖ...	Read more
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်ရွှေ ကွယ်လွန်ခြင်း တစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 13, 2017 In: Breaking News, News, State and Division NewsNo Comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးအောင်ရွှေကွယ်လွန်ခြင်း တစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ခန်း...	Read more
အမျိူးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချူ ပ်​ ဒုတိယအကြိမ်​ ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး လူငယ်​ညီလာခံကျင်းပ​ရေး ​ကော်​မရှင်​မှ ခရိုင်​ညီလာခံကျင်းပ​ရေး​ကော်​မရှင်​ တာဝန်​ခန့်​အပ်​လွှာ​ပေးအပ်​ပွဲနှင့်​ ​တွေ့ဆုံပွဲ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 07, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် အမျိူးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချူ ပ်​ဒုတိယအကြိမ်​ ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီးလူငယ်​ညီလာခံကျင်းပ​ရေး ​ကော်​မရှင်​မှခရိုင်​ညီလာခံကျင်းပ​ရေး​ကော်​မရှင်​ တာဝန်​ခန့်​အပ်​လွှာေ...	Read more
စက်တင်ဘာ ၇ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁ နာ ရီက အဖွဲ့ ချုပ်ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော် မတီအစည်းအဝေး ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေးကို အဖွဲ့ချုပ် (ဌာန ချုပ်) ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုပြန်ကြားရေးသတင...	Read more
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 05, 2017 In: News, State and Division NewsNo Comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် လွတ်လပ်သည့် အာရှအသံ (RFA) တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို သြဂုတ် ၃၁ရက် ညပိုင်း RFA သတင်းဌာန၏ ဖေ့စ်ဘွတ် စ...	Read more